Zvaungade Kuziva Nezve Pfizer COVID-19 Vaccine - HealthTimes
January 13, 2021 Michael Gwarisa
NYIKA ye Zimbabwe mumwedzi iri kutevera ichange ichibaya nhomba kana kuti vaccine re kudzivirira kubva kuhutachiwana hwe Coronavirus hunokonzera denda re COVID-19. Mumiriri we United Kingdom (UK) mu Zimbabwe, Muzvare Melanie Robinson vakavimbisa ivo kuti nyika yavo ichange ichibatsira nyika ye Zimbabwe nekubaya vanhu mamiriyoni matatu nhomba yekudzivira kubva ku Covid-19.
Zvipatara zvakawanda mu Britain zvakatotanga kubaya vanhu domwe rekutanga (first dose) re vaccine re Pfizer. Bazi rinoona nezvehutano mu Britain re National Health Service (NHS) rakati iro nhomba ye Pfizer rakachena huye harikuvadzi zvakare rinodziviria kubva ku Covid-19.
Pfizer Vaccine Inoshanda Here?
Mutsvakurudzo dzakaitwa, nhomba ye Pfizer/BioNtech yekudzivirira COVID-19 zvakaonekwa kuti inodzivira munhu kuti asabata chirerwe che COVID-19 zvakapetwa zvikamu makumi mapfumbamwe neshanu kubva muzana (95%).
Chii Chiri MuVaccin?
Mushonga uyu une inonzi iyo Ribonucleic acid (RNA) inotakura mashoko (information) kana kuti zvinofanira kutevedzerwa mukugadzira inonzi Spike Protein. Spike Protein iyi inotambirwa nemasoja emuviri yoshandiswa kugadzira simba rekudzivirira kubva kuhutachiwana. Vaccine iri rakaita zvekugadzirwa (synthetic), harina kugadzirwa kubva kuhutachiwana kana kuti mavirus chaiwo, naizvozvo harivhiringidze masikiriwo akaitwa muviri wemunhu kana kuvhringidza DNA.
Vaccine Rinoshanda Sei?
Panopinda hutachiona hwakaita sema virus mumuviri, hunopinda huchirwisa masoja emuviri huchiberekana huchiwanda. Hunotora muviri nechisimba inonzi iyo infection pachirungu, inova iyo inozokonzeresa kuti munhu arware. Muvuri unoshandisa nzira dzakawanda wanda kurwisa hutachiwana. Panopinda hutachiwana kekutanga mumuviri, zvinogona kutora mazuva akati kuti, muviri usati watanga kugadzira nekushandisa masoja anorwisa hutachiwana. Panopinda hurwere mumuviri, masoja anorangarira zvaanenge akambodzida kana kusanga nazvo paakambo rwisa hutachiwana munguva dzinge dzakambopfura. Panobaiwa munhu kana kudonhedzerwa Nhomba kana kuti Vaccine, rinogadzira nekusimbida masoja emuviri nekuteedzera mashandiro nemafambiro anoita hutachiwana mumuviri. Vaccine rinoderedza mukana wekurwara kuburikidza nekushanda nemasoja ekurwisa hutachiwana mumuviri pamwe nekugadzira dziviriro kubva kuchirwere.
Kunyangwe zvazvo mamwe ma Vaccine anoshandiswa kudziviria zvirwere zvedzibwa kana kuti flu anoshandisa hutachiona hwakafa kana kuti hutachina husisashande kugadzira dziviriro, Vaccine re Pfizer rakatarwa kuti rishande kudzivira COVID-19 harishandisi hutachiona hwakafa kann husisashande kasi chinotori chinhu chakagadzira. Vaccine iri rinoshandisa nzira dzekufambiswa kwe mashoko mumuviri (messenger RNA) kudzidzisa masoja emuviri kuti akwanise kuona kuti mumuviri mapinda hutachiona hwe SARS-CoV-2 virus. Munhu haakwanise kuwana COVID-19 kubva kuvaccine iri.
Munhu angade ma dose mangani e Vaccine kuti rishande mumuviri?
Vaccine re Pfizer/BioNTech COVID-19 rinotarisira kuti munhu atore kaviri mazuva akasiyana. Mushure mekunge watora mushonga kekutanga (first dose), unomirira mazuva makumi maviri nerimwe (21 days) usati watora kechipiri (Second dose).
Vaccine Iri rakachena Here, Harikuvadze here?
Veku United States Food and Drug Administration vanoti ivo pavanhu zviuru makumi matatu (43, 448) vakabaibhwa vaccine iri paranga richiri kuvhenekwa kuchena kwaro hapana kurwara kwakaonekwa muvanhu zvinoratidza kuti Vaccine rePfizer rakachena huye harikuvadze.
Ve Centre for Disease Control (CDC) vanokurudzira ivo kuti kunyange vaya vakambosangana ne matambudziko akasiyana siyana mushure mekunge vambotora imwe mishonga kuti vatange vataura nema chiremba vasati vabaiwa vaccine iri huye kuti vana chiremba vava tarise kwe maminutes makumi matatu (30).
Ve Koreji ye American College of Obstetricians and Gynecologists vanokurudzira ivo kuti vakadzi vakazvitaura vachikwanisa kuti vabaiwe vaccine iri kuti vabaiwe kana zvichi bvira.
Zvinotora Nguva Yakareba Sei kuti muviri uvake masoja anorwisa COVID-19 mushure mekunge watora Vaccine?
Zvinotora mavhiki mashoma kuti muviri ugadzire masoja mushure mekunge watora Vaccine. Izvi zvinoreva kuti unokwanisa kubata chirwere che COVID-19 uchangobva kutora vaccine. Izvi zvinoitika nekuti Vaccine rinenge risati rava kushanda saka harikwanise kukudzivirira. Zvakadaro munokurudzirwa kuti kunyange mabaiwa Vaccine murambe muchipfeka mamask, kugeza nekusanitiser maoko nekusapinda pachaunga.
Pane zvaunonzwa here kana ukatora Vaccine Re Pfizer (Side Effects)
Mushure mekunge watora Vaccine iri, unogona kurwadziwa neruoko rwunenge rwabaiwa jekiseni, unonogon kunzwa kuneta kana kutemwa nemusoro kunyanya-nyanya kana uchinge watora mushonga kechipiri (second dosage). Zviratidzo izvi zvinowanzopera mushure mema awa 24 kana kuti zuva rimwe chete.
Ndiyani achatanga kuwana Vaccine?
Pasi rese zvakaonekwa kuti vashandi vese vemuzvipatara vangave vana mukoti, chiremba, ma nurse aids, vana muzvina mushonga nevose vanganzi ivo mafrontli ne healthe care wokers nevakwegura ndivp vachatanga kubaiwa Vaccine. Ruzvinji rwese rwuchazowana Vaccine nechepamberi zvishoma kasi richatanga kubaiwa avo vari panjodzi hombe.
The information in this release was reviewed and fact-checked by UAB Associate Professor of Infectious Diseases Jodie Dionne-Odom and translated into Shona by Michael Gwarisa, Editor, HealthTimes, Zimbabwe’s leading online health news publication.
#COVID19, HealthTimes Vernacularpfizer vaccine